သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): မသီတာက စခဲ့တဲ့.............
မငြီးမငွေ့ ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ရီစရာရော မောစရာပါ တစ်လုံးမကျန်ဖတ်သွားပြီ သူကြီးမင်းရယ်။
Jacintha Saldanha အကြောင်းဖတ်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ အဆုံးသတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ အရာရာဟာ သူ့သဘောသူဆောင်ပြီး ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ် ပျက်ချိန်တန်ပျက်လို့ပဲ ဆိုရမှာပေါ့လေ။
Saturday, 15 December 2012 at 00:44:00 GMT
" ဘာမှမသိဘူး။ သမီး အရမ်းကြောက်တာဘဲ သိတယ်။ အင့် ဟင့် ဟင့် ဟင့် " :D
ဆောင်းနှင်းလည်း လာလည်ဖြစ်ရင် သူကြီးမင်းဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး လာခေါ်ခိုင်းမှာပဲ .. :P
အဲ့သတင်းတော့ ခုတစ်လော တော်တော်ဟော့ဖြစ်နေတာ ..
ဟိုလက်ခံပြောတဲ့ နာ့စ်မကရော .. ??
Saturday, 15 December 2012 at 02:59:00 GMT
Fish & Chipsစားနေရတာ အစာမကြေလို့ အာလူးပူရီ စားချင်တာနဲ့ အိမ်ပြန်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ Saldanhaအတွက် အထူး ဝမ်းနည်းကြေကွဲမိပါတယ်ဗျာ...။
Saturday, 15 December 2012 at 04:15:00 GMT
သီတာ... ဖိုးနီမြေးကို.. လိုချင်.. တပ်မက်မောသူ....ကိုမောင်...မင်းသားလေးနဲ့...မယှဉ်နိုင်...အချစ်ပြိုင်ပွဲမှာ..
Saturday, 15 December 2012 at 08:46:00 GMT
သလိုပဲ ရီစရာမောစရာ ဖြစ်ကြရှာတယ်.....။
Saturday, 15 December 2012 at 11:38:00 GMT
အလွန့်အလွန်ကို ဖတ်လို့ကောင်းတယ် သူကြီးမင်းရေ..
ပြောသွားတာလေးတွေကိုက ဒါက ဒီလိုရှိတယ် ဟိုဟာကတော့ ဟိုလိုရှိတယ်လို့ လက်နဲ့ထောက်ပြသွားသလိုဘဲ ။
Saturday, 15 December 2012 at 12:31:00 GMT
Monday, 17 December 2012 at 17:19:00 GMT
အင်း.... တစ်ကယ် မောသွားတယ်အကို ...ရေတိုက် ပါ ..:)
Tuesday, 18 December 2012 at 09:41:00 GMT
ကြောက်တယ် ကြောက်တယ် ခိုခိုမောင် ရေ တမီး အရမ်းကြောက်တယ် ဟဲဟဲ ကနေ
ကလော်တုတ်ချင်တဲ့စီ ရောက်သွားတယ် သကြီးရေ ဒါနဲ့ သကြီးမင်းလည်း ကျန်းမာရေးလေး ဘာလေး ဂရုစိုက်အုန်း အရမ်းအေးတယ် မဟုတ်လား
အဲလောက်တောင် အေးလားဟင် တဂျီးမင်း..
ပြောရင်းနဲ့ ချမ်းလာပြီ ဒီက...ဟိ...ဂတ်..ဂတ်
ထို့ကြောင့် အလည်လာရင် အတိုးနဲ့ ဘာပြန်ဧည့်ခံမလဲ
Wednesday, 19 December 2012 at 12:59:00 GMT
Sunday, 23 December 2012 at 09:34:00 GMT
Wednesday, 24 April 2013 at 04:58:00 BST